Football Khabar » कोपा अमेरिकाबारे ‘फुटबल विशेषज्ञ’को यस्तो भविष्यवाणी !
कोपा अमेरिकाबारे ‘फुटबल विशेषज्ञ’को यस्तो भविष्यवाणी !
दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका जुन १४ बाट ब्राजिलमा हुँदैछ । १२ देशले प्रतिस्पर्धा गर्ने यस प्रतियोगितामा यसपटक आयोजक ब्राजिलसहित अर्जेन्टिना, उरुग्वे र चिलीलाई प्रमुख उपाधि दाबेदार टिम मानिएको छ ।
चिली साबिक विजेता टिम हो । उसले पछिल्ला दुई संस्करण लगातार यो उपाधि जितेको छ । लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना यसअघिको फाइनलमा चिलीसँग हारेको थियो ।
कोपा अमेरिका आउन ५ दिन बाँकी छँदा हाल फुटबल विशेषज्ञका रूपमा काम गरिरहेका पोर्चुगिज म्यानेजर जोसे मोउरिन्होले कोपाबारे भविष्यवाणी गरेका छन् । अघिल्लो दिन एक टिभी शोमा करा गर्दै उनले यसपटक उरुग्वे र ब्राजिलमध्ये एकले उपाधि जित्ने बताएका छन् ।
ब्राजिलको टिममा नेइमार नभए पनि अन्य एकसे एक खेलाडी भएको र उरुग्वेसँग उत्कृष्ट खेलाडी भएकाले उनीहरू उपाधि दाबेदार रहने मोउरिन्होले बताए । ‘मेरो हिसाबमा यसपटक ब्राजिल र उरुग्वेमध्ये एक टिम च्याम्पियन बन्नेछ । यो उनीहरूको समय हो,’ मोउरिन्होले भने, ‘ब्राजिलमा नेइमार छैनन् । तर, उनीहरूका लागि म समस्या देख्दिनँ ।’
‘अर्जेन्टिनाको अवस्था के हो’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा मोउरिन्होले उनीहरू अहिले उपाधि जित्ने लयमा नरहेको बताए । ‘उनीहरूसँग लियो (लिओनल मेस्सी) जस्ता खेलाडी छन् । र, उनी एक्लैले उपाधि जित्न सक्दैनन्,’ मोउरिन्होले थपे, ‘अर्जेन्टिना फाइनलअघि नै आउट हुन सक्छ ।’
प्रकाशित मिति २६ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०४:५५